Ukushisa okuphansi kwe-assembley test - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
Ukuhlolwa komhlangano wokushisa okuphansi kusetshenziselwe ukuhlola ikhono lezixhumi zokuthola ithuba lokuxhumana ngogesi ngaphansi kwezinga lokushisa eliphansi. Lapho umkhiqizo uvezwa indawo ephansi yokushisa isikhathi eside, ukusebenza, ukusebenza, ikhwalithi kanye nempilo yomkhiqizo kungathinteka. Lokhu kudinga ukuhlolwa kobushushu obuphansi bomkhiqizo ukuhlola ukumelana komkhiqizo namazinga okushisa aphansi.
UJera uqhubeka nokuhlolwa kwimikhiqizo engezansi
Isixhumi sokubhoboza ukwahlukanisa esifanelekile kufanele sibe nokuxhumana okuzinzile kagesi phakathi kwabaqhubi lapho kungaphansi kwezinga lokushisa eliphansi. Sayifaka egumbini lesithwathwa futhi sahlola ukuxhumana kwaso ngogesi lapho i-torque yamantongomane ilungiselela.
Izinga lethu lokuhlola ngokusho kweCENELEC, EN 50483-4: 2009, NFC 33-020, DL / T1190-2012 yezinsiza zokusabalalisa ugesi. Sisebenzisa ukuhlolwa kwamazinga okulandelayo emikhiqizweni emisha ngaphambi kokuqalisa, nokulawulwa kwekhwalithi yansuku zonke, ukuze siqiniseke ukuthi ikhasimende lethu lingathola imikhiqizo ehlangabezana nezidingo zekhwalithi.